people Nepal » राशिफल : कार्तिक २४ गते / नोभेम्बर १० तारिख शुक्रबार राशिफल : कार्तिक २४ गते / नोभेम्बर १० तारिख शुक्रबार – people Nepal
राशिफल : कार्तिक २४ गते / नोभेम्बर १० तारिख शुक्रबार
श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल कार्तिक २४ गते शुक्रबार इश्वी सन २०१७ नोभेम्बर १० तारीख
मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन अपेक्षा गरेको तथा आश्वासन मिलेकै तर्फबाट भन्दा अन्य क्षेत्रबाट केही भौतिक उपलब्धि हुनसक्ने छ । योजनाभित्र नपरको काम बन्नसक्ने छ भने अनपेक्षित आम्दानी पनि हुनसक्ने सम्भावना छ । कसैकसैलाई गलत संगत तथा विपरित आहारको सम्भावना पनि देखिएकोले खानपानमा अल्लि ख्याल गर्नु उपयुक्त हुनेछ । आज तपाईँले बोलेको कुराको कसैबाट अपव्याख्या हुनसक्ने छ अल्लि ख्यालपूर्वक बोलीव्यवहार गर्नुपर्ला । समाज सेवा वा परोपकार आदिमा चेष्टा बढ्नेछ । दुई अङ्क, सेतो रङ्गको उपयोग गर्नु र माँ भुवनेश्वरीको भक्तिभाव गर्नु आज तपाईँको लागि शुभदायक हुनेछ ।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन प्रतिष्ठा बढाउनसकिने छ । कुनै औपचारिक कार्यक्रम आदिमा सरिक हुनपाइने तथा मान्छेहरुबाट ईज्जत तथा मानसम्मान मिल्नसक्ने छ । सहज दिन परेकाले केही कामकार्य बन्ने र मनोरञ्जन एवम् खुशीयालीप्रद दिन रहने छ । मनोवाञ्छित स्वादिष्ट भोजनद्वारा मेजमानी मिल्नेछ । इष्टमित्रको आगमन हुने र उपाहार मिल्नसक्ने छ भने पारिवारिक सौहार्दता बढ्ने छ । नयाँकाममा वा शेयर आदिको लगानीको अवसर पर्ने पनि सम्भावना छ । समयको सदुपयोग गर्न जानेको खण्डमा आज यहाँलाई पेशागतक्षेत्रबाट उचित लाभ एवम् सफलता प्राप्त हुनेछ । माँ इन्द्रयाणीको दर्शन एवं भक्तिभाव शुभफलप्रद हुनेछ ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन केही केही संघर्षको सामना गर्नपर्ने देखिएको छ । कामकार्यमा बढी नै कोसिसले मात्रै थोरै सफलता मिल्नसक्ने छ । बहकावमा आएर कुनै पनि हल्लामा नलागेको राम्रो हुनेछ भने बुद्धिमततापूर्वक फजुलका विषयबाट तर्किनु आज तपाईँको लागि उपयुक्त हुनेछ, अन्यथा खतिक्षति हुनसक्ने र पश्चाताप पनि पर्नसक्ने सम्भावना रहेको गोचरले देखाएको छ । गोचरले अनावश्यक यात्रा हुनसक्ने कुरालाई पनि लक्षित गरिरहेको छ । यहाँको लागि आज तीन अंक र पहेंलो रंगको प्रयोग एवम् माँ कुमारी देवीको भक्तिभाव शुभप्रद हुनेछ ।
मकर राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन रमाइलो भएरै बित्नेछ । व्यवसायिक कामकार्य ठिकै रुपमा सुचारु हुनेछन् । व्यवहारिकता तथा औपचारिकता निभाउनु पर्ने वातावरण पनि बन्ने छ । दाम्पत्य एवं प्रेम जीवनमा समझदारी कायम गर्न सकिने छ । प्रेमाभिलाषीहरुको लागि पनि कुरो मिलन बिन्दुमा ल्याउन सकिनेछ । दैनिकी कामबाट लाभ र सन्तोषको प्राप्ति हुनेछ । आज तपाईको लागि मान्यजनको दर्शनभेट्, तीर्थयात्रा, भगवान माँ भुवनेश्वरीको श्रद्धाभक्ति तथा स्तुति उपयुक्त हुनेछ ।